ChiGermany PAKUNHU KUNHU, KUNYANYA KUNYANYA | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » German Pronouns
1 GERMAN YEMHARA TIMES (PERSONAL PRONOMEN)
2 zvirevo zveGerman
3 Chiverengero Chemashoko echiGerman.
4 Mazita eGerman
GERMAN PERSONAL TIMES (PERSONAL PRONOMEN)
Muchikoro ichi, tichaongorora zvirevo zveGermany.
Mazita omunhu mazwi anoshandiswa zvinoenderana navo pachinzvimbo chemazita akasarudzika kana emhando.
Mataurirwo emunhu muTurkey Ini, iwe, iye, isu, iwe, iwo mazwi. Sezvo kuchingova neshoko rimwe chete Türkçe o de muTurkey, zvatiri kutaura nezvazvo ndezvese izvi zvitatu, angave ari murume, mukadzi kana bonde istero”Tinoshandisa chirevo.
Asi muchiGerman, zita rekuti “o dır rakasiyana pamazita echirume, echikadzi uye asina zvepabonde. semuenzaniso tinokwanisa kushandisa izwi rekuti “o Türkçe muchiTurkey kune vese varume, vakadzi uye vasina upenyu. Semuenzaniso, pachinzvimbo chemutsara uyu ndinoona bhuku racho ”, tinogona kutaura kana kuti ndiri kuriona.UN"Zvinoenderana nebonde rezvatinoreva nesabito." er-Si-es zvirevo zvinofanirwa kushandisa iyo yakakodzera. Kune mazita echirume ehurume er chirevo sie Chirevo chezita rezvebonde es chirevo.
Kana uchitaura nezvevanhu vamwe kana mazita akasarudzika er-Si-es Rimwe remazita rinoshandiswa. Mazita anoshandiswa kuvarume uye mataurirwo egadziriso anoshandiswa kuvakadzi. Semuenzaniso, Muharram, Omar, Samet nekuti iwo mazita evarume munzvimbo yavo er chirevo. Zeynep, Melis, Mary nekuti izita revakadzi munzvimbo yavo sie chirevo. Mazita anoshandiswa kune zvinhu zvisina zvepabonde. Mune mamwe mazwi; ik er in inoshandiswa panzvimbo yemazita anoti artikeli, ik sie yerine panzvimbo yemazita anofa artikeli, ik es ”anoshandiswa pachinzvimbo chemazita e-art es isimler.
Ngatitaurei pamwe chete muenzaniso iyo yeGerman Personal Pronouns:
Imwezve nyaya yatinofanira kutaura pamusoro pezvirevo zveGerman; sezvinoonekwa pamusoro sie Chirevo chakanyorwa katatu. tanga sie chirevo wechitatu wechitatu Chirevo chii icho. Kutanga neimwe kesi yepazasi sie vimbiso zhinji muTurkey ivo yakafanana nesabizita. Kutanga neyekupedzisira capital letter Aug zvirevo kuvanhu iwe zvausingataure Nyasha kushandisa.
KUFUNGA IZVI: Kudzidzira zita rechiGerman i Akkusativ
Semuenzaniso, tinotaura nemudzidzisi wedu, maneja wedu, vakuru vedu sewe, kwete iwe. Inoshandiswa kune ichi chinangwa Aug Chirevo chinogara chichigadziriswa. German sie Tinoita sekunge tiri kunzwa iwe uchiti nasıl nzira yekuvatsaura nayo “nekuti mudonhwe une zvinopfuura chimwe. Ngatizvipindure izvozvi.
Mutsara sie - Sie Ukaona chirevo, tinotarisa kubatana kwechiito kuti tinzwisise kuti ndiani-zvazvinoreva. Kubatanidzwa kwechiito; Isu tinonzwisisa kana izwi rechinongedzo rinoshandiswa kureva kuti “iwo,, kana richishandiswa mupfungwa ye” ivo. Yatoshandiswa kare chinangwa chekupfava "Sie Chibvumirano nekuti chekutanga chinowanzoiswa capitalization, kana (kunyangwe zvisiri pakutanga kwechirevo) eğerAug" chirevo ipapo tinogona kunzwisisa zviri nyore kuti rinoshandiswa kukwezva nyoro. Sezvo iwe paunotarisa mutsara yemuenzaniso watichakupa munguva diki, unozonzwisisa nyaya yacho zviri nani.
Muzvidzidzo zvedu zvakapfuura, takadzidza tsanangudzo dzakareruka sekuti "iri ibhuku, iri tafura". Zvino zvatakadzidza madimikira, ngatidzidze kugadzira mazwi anoti “Ini ndiri mudzidzisi, uri mudzidzi, iye chiremba chiremba. Mumitsara iyi i-sen-u Mazwi acho munhu mumwe chete mataurirwo.
Ngatipe muenzaniso wekuona kune zvirevo zveGerman. Zvinoratidzwa pazasi zvichapa kunzwisisa kwakanaka kwechinhu.
ChiGerman Maitiro Ezvinoreva (Akaenzanisirwa)
Iye zvino ngatidzidze kuvaka mazwi anoti "Ini ndiri mudzidzisi, uri mudzidzi, iye chiremba". Mumitsara iyi i-sen-u Mazwi munhu chirevo. Vatsigiri vanoshandiswa kugadzira mitsara yakadai seChirungu (eg am-is-are). Iye zvino ngationei ounobatsira eiri anoshandiswa muchiGerman uye zvimisikidzo zvavo zvichienderana nemadimikira
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti tafura inotevera inofanirwa kuve inobata nemusoro. Onawo mienzaniso iri padyo petafura. Mumitsara yemienzaniso, munhu wekutanga adonhwe anoteedzerwa nebetsero yechiito uyezve zita. Iyo nzira yemitsara yakadaro yakafanana neiyi. Kurudyi kwetafura ndiyo mienzaniso yemitsara yakafanana muChirungu. Tarisa tafura inotevera nokungwarira.
KUFUNGA IZVI: German Simple Sentences, German Sentence Samples
Semuenzaniso mitsara neyeGerman
Mune iri tafura iri pamusoro, mienzaniso inopihwa nenzira yakapfupi yemitsara yakagadzirwa uchishandisa madimikira eGerman. Iwe unogona zvakare kugadzira mitsara dzakasiyana pachako kuti uite. Paunonyanya kudzidza, zvinokurumidza uye nyore kuti udzidze zvirevo zvechiGerman.
Rega tikupe tafura yemadimikira echiGerman kamwe chete, iwe unogona kupurinda peji rino kana uchida.
GERMAN KUZVIMA MAZUVA ari Turkish
er O (YOKUTAURA SEX)
sie O (YEMAHARA YEMAHARA)
es O (ZVEZVISANGANO)
Aug Iwe (Nyoro HITAP)
du: iwe (Du)
er: o murume
sie: o (mukadzi)
es: o (es) (kusarerekera rudzi)
wiri: isu (V)
ihr: iwe (IGR)
sie: ivo (Zu :)
Sie: iwe (zi :)
Shamwari dzinodikanwa Kana isu tikatapudza zvishoma zvirevo zveGerman, dudziro yeshoko reGerman ine zvirevo zvakasiyana. Zvinoreva mutsara kana chiito conjugation. Izvo zvinokwanisika kubvisa. Chinhu chakakosha izvozvi ndechekuti iwe udzidze aya mazwi chaizvo.
Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti mune zvirevo zvakapihwa pamusoro, zita reSie, iro rinoshandiswa chete mukutenda zvinyoro, rakanyorwa muchinyorwa chepamusoro uye rimwe muchikamu chakaderera. Tinowanzo shandisa zvinyoro nyoro kutaura nevanhu vakuru kana vanhu vatisingazive. Kana iwe ukaongorora uye nekudzidza iyo mishumo yemadimikira pamusoro pezvirevo zveGerman zvakapihwa pamusoro, iwe haungazove nedambudziko.
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german chirevo, German lessons, German pronouns, German pronouns, chimiro chemunhu chimiro chiito, chiGiriki chirevo chemunhu chidzidzo, chimiro chomunhu chirevo, chirevo chirevo, German pronouns, zvirevo zvemagerman german
14 November 2013, 18: 17
Sie mutsa chaizvo: DD
Mistaken, sie: ivo, ihr: iwe wakanyora, asi kwete imwe nzira yakapoteredza?
Bata Gülselin zvakananga akati:
09 October 2014, 19: 19
Sie zvinoreva zvinhu zviviri, handizvo, uye tinoziva sei zvinorevei?
Kana iwe uchiverenga, uchaona sarudzo yezvinyorwa
18 November 2015, 16: 26
Ndine tariro iyo inoratidzwa nokukurumidza sezvinobvira kuvonga kusati kwaitika chii chinonzi einen
15 February 2016, 15: 22
Sie inotanga neB Big S (Iwe Kurumbidzai - Official)
sie ishoma s (she is lady)
chi German chirevo chirevo
Unogona kunyora mazwi mashoma echiGerman
Bata Erif zvakananga akati:
28 Mart 2019, 18: 56
Handinzwisisi mvura chero ipi zvayo gore rino, gore rino yew bide German chimiro yetmiyomus xnbdbddb